Blaise Pascal: biography, hupenyu, hunhu uye mabasa | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 10/05/2021 09:57 | Kuparadzanisa
Nhasi tichataura nezve mumwe wevarume vakave nenguva yakaoma kwazvo kuzivikanwa semunhu anofunga zvine mukurumbira vese varume vanoshamisa munhoroondo. Ndezve Blaise Pascal. Aive nyanzvi yemasvomhu, yefizikisi, muzivi, biologist, hunhu uye anopokana. Kunyangwe pasina kana munhu akambokwanisa kutaura nezvake zvakakurisa zvedzidzo, zvaive zvakamudhurira kuti azivikanwe semunhu anofunga anemukurumbira. Akaita mimwe mipiro kune sainzi uye nzanga mune zvese. Mazhinji ematauriro ake semunhu anofunga zvakanaka achiripo munharaunda yedu nhasi.
Naizvozvo, isu tiri kuzotsaurira ichi chinyorwa kukuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve biography uye mabasa aBlaise Pascal.
2 Kugona kwaBlaise Pascal
3 Philosophical uye yechitendero nguva
Kubudirira kwesainzi kwakaita kuti Blaise Pascal azivikanwe semasvomhu, asi akaviga pfungwa dzake kwenguva yakareba, uye pfungwa idzi dzinosanganisira matambudziko ese anogona kuitika. Neraki, nhoroondo yakwanisa kupora. Pascal aive murume wechinyakare munguva yake, achienzaniswa na iye panguva yake René Descartes, inversion ine rima uye isina hurongwa.
Blaise Pascal akaberekwa muna Chikumi 19, 1623 muClermont Ferrand, France, uye aive wemhuri yepasi yepamusoro mune nzvimbo. Pamusoro paBryce nevabereki vake, mhuri iyi yaive nasisi vake Gilbert (munyori wekutanga wezveupenyu) uye mudiki Jacqueline, uye vakasimbisa hukama hwepedyo naye. Kunyanya muhudiki hwake, hutano hwaPascal hwaizivikanwa noutera hwepanyama.
Asati ave nemakore maviri ekuberekwa, akange atotambura nezvirwere zvinokonzeresa zvirwere zvemudumbu uye mhasuru atrophy, uye mukati memakore akapfuura akatanga kuita phobias dzisingazivikanwe (senge kusashivirira kuimba yekugezera kana kuona vabereki vake vachimbundirana), izvo zvakamurwadzisa. Aya mamiriro akaita sekunyangarika gare gare, asi kutemwa nemusoro, kushushikana uye kurwadziwa zvakaramba zviripo uye zvaizokanganisa hupenyu hwake neuzivi.
Akapihwa dzidzo yakanyatsonaka kuitira kuti anzwe achikwanisa kuzadzisa zvinangwa zvake zvese. Akagashira kuverengwa kwechiGreek nechiLatin zvekare uye zvinyorwa zvevanhu vakuru, uye baba vake vakaratidza kupatsanurwa kwakasimba pakati pemibvunzo yesainzi nechitendero.
Kugona kwaBlaise Pascal
Blaise Pascal akatanga kuratidza zvimwe zvinoratidza zvepfungwa yake inoshamisa kunyanya mumunda we masvomhu. Aingova nemakore gumi nerimwe chete, akawana chirevo che11 kubva mubhuku raEuclid Elements, iro rinotipa muenzaniso wakanaka weyekufungidzira kugona kwake. Akanga achinyatso kuratidza kugona kwake kwenhamba.
Asi basa rake haringogumira pane dzidziso. Kubatsira baba vake, vaive muteresi uye vaida kuverenga zvakawanda, vakagadzira "arithmetic muchina" pazera remakore 19: karukureta. Iko mukana weiyi kupokana kwakapararira zvine mwero muna 1642 uye zvakabva zvangooneka pachena.
Muna 1647, zvakaitika zvakaitika: Pascal naDescartes vakasangana pakupedzisira. Vakabva vatovengana. Mune rake rakakura basa reuzivi "Pfungwa", Pascal akataura kuna baba ve "Methodological Mazwi" se "zvisina basa uye zvisina chokwadi", ukuwo Descartes aiona basa raClermont Ferrand se "risina chinhu mumusoro make." Hapana". Panguva iyoyo, kuvepo kwekutsvaira kwaive imwe yenyaya dzaipisa kwazvo musainzi, kunyanya nekuti yaigara ichirambwa. "Chinhu" chingavapo sei "musina"?
Muna 1648 Pascal akatanga kuyedza kwake nechinangwa chakajeka: kuratidza kuti chatinoti "hapana" chiri "chimwe chinhu", kuti idambudziko repanyama, kwete rekufungidzira chete. Humbowo hunobva mubhuku rake. Hukama huripo pakati pekuyedzwa kukuru kwemvura, uchitsanangura kuti kumanikidzwa kwemuchadenga ndiko kunokonzeresa "kutya kwemhepo" kwezvinhu, kwaive kumwe kungoitika panguva iyoyo. Kurema kwako nemhepo kumanikidza. Pascal pachake aizvirumbidza nezvakabuda uye akatsanangura basa rake se "rakanyanya kukunda pane ese anogona kuitwa pachinhu ichi."
Imwe yemipiro mikuru kumasvomhu naBlaise Pascal yaive Calculus yezvingaitika.
Philosophical uye yechitendero nguva
Panguva iyoyo chikamu chechipiri chehupenyu hwaPascal chakatanga, achisiya masvomhu nesainzi padivi, uye achipa simba rakawanda kuuzivi. Iye akasiya kutsvagurudza kwake kuri kuenderera, akanyanya kufarira dzidziso yebhaibheri, ndokunyora zvakawanda zvekufungidzira. Pascal anoshushikana nekushandisa chinamato nekutenda semidziyo yekutanga yekutsvaga mazano kubva pakadzika kwemweya.
Yaive panguva ino yaakatanga kutora magwaro aakaratidzira mune yake dzidziso. Basa harina kumbopedzwa kana kuburitswa, raizodhindwa nemusoro wenyaya "Pfungwa" panguva yekufa kwake, uye ndiro rakakosha basa reuzivi raanaro.
Kuma 1656 muJansenist Antonie Arnaud, uyo aipomerwa kuve muCalvin, akabatsira shamwari yake. Ini ndaimunyorera izvo zvinozivikanwa se Tsamba dzematunhu, iyo yaizopedzisira yave rimwe remabasa epamusoro ezvinyorwa zveFrance. Tsamba dzakaburitsa kunakidzwa muFrance nekuti yaive nguva yekutanga kuti chitendero neuzivi zvakatorwa mumaraibhurari uye mudzimba dzekudzidzira zvikapihwa kuvanhu mumutauro wavo wakapusa. Pascal anokwevera pachena ruzhinji kune mibvunzo yekukosha kwehungwaru.
Blaise Pascal anomiririra vafungi vanobatanidza zvakakwana kutenda nesainzi, kufungidzira uye kuyedza kwakasimba. Tarisiro yake yakanangidzirwa kumatunhu ese eruzivo: masvomhu, dzidziso, huzivi, nezvimwe. Ruzivo rwese rwakamubatsira.
Kusiyana nevamwe vanhu vanoisa ruzivo rwese rwevanhu pakufunga, iye aisada kusiya chikamu chemanzwiro, uye kudzivirira ruzivo kunofanirwa kuve kusangana kwakakwana kwechikonzero nemoyo. SaSchopenhauer gare gare, akapomera nzanga kuti zvinoita kunge havanzwisise chokwadi nezve kudzikira kwetsika, vachichiita mutoro wazvo. Naizvozvo, tinofanira kumurangarira uye kumuisa munzvimbo yekuremekedzwa. Mutsoropodzi / anoyemura Friedrich Nietzsche akamupa mutero: «Pascal, wandinoda, akandidzidzisa zvinhu zvisingaverengeke. MuKristu chete anonzwisisika munhoroondo ”.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvenhoroondo uye biography yaBlaise Pascal
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Kuparadzanisa » Blaise Pascal
Chii chinonzi glacier uye inogadzirwa sei